Illustrator နှင့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် Font Awesome ကိုအသုံးပြုနည်း | Martech Zone
ငါ့သားကလိုတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ် သူ၏ DJ နှင့်ဂီတထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် (ဟုတ်ကဲ့၊ သူသည် Math ၌ Ph.D ဘွဲ့ယူထားသူနီးပါး) ရှိသည်။ သူ၏လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများအားသူ၏စီးပွားရေးကဒ်ပြားပေါ်တွင်ပြသရန်နေရာချွေတာရန်၊ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုစီအတွက်အိုင်ကွန်များကို အသုံးပြု၍ သန့်ရှင်းသောစာရင်းကိုပေးလိုခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံသိုလှောင်ရုံတစ်ခုမှအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စုဆောင်းမှုတစ်ခုစီကိုဝယ်ယူမည့်အစားကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည် font Awesome ကို.
Font Awesome သည်အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ အရိပ်အရိပ်နှင့် CSS စွမ်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်အရွယ်အစားကြီးမားသည့် vector icon များကိုပေးသည်။
အက္ခရာများသည် vector အခြေခံ၍ သင်၏စီမံကိန်းအတွက်အရွယ်အစားကြီးသောကြောင့်၎င်းတို့သည် Illustrator သို့မဟုတ် Photoshop ကဲ့သို့သော graphical desktop application များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။ သူတို့ကိုပင်အောက်လိုင်းများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပြီးပုံဥပမာတွင်သုံးနိုင်သည်။
Font Awesome ကိုဤတံဆိပ်များနှင့်အခြားအိုင်ကွန်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ထည့်သွင်းရန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော်လည်းသင်၏ Mac သို့မဟုတ် PC တွင်တပ်ဆင်ရန်အမှန်တကယ်ဖောင့်ကိုဒေါင်းလုပ်ချနိုင်သည်ကိုသင်သတိမပြုမိပါ။ TrueType ဖောင့် (ttf ဖိုင်) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် download,။ font ကို install လုပ်ပါ၊ Illustrator ကို restart လုပ်ပါ။
အဆိုပါဖွင့်ကိုဖွင့် Font Awesome Cheatsheet သင့်ရဲ့ browser မှာ။
Illustrator သို့မဟုတ် Photoshop (သို့မဟုတ်အခြားဆော့ဖ်ဝဲ) ကိုဖွင့်ပါ။
Font ကိုသတ်မှတ်ပါ font Awesome ကို.
Copy ကူးခြင်းနှင့်ငါးပိ cheatsheet မှအက္ခရာကိုသင်၏ဖိုင်ထဲသို့ထည့်ပါ။
Illustrator တွင် Font Awesome ကိုအသုံးပြုနည်း
ဒီမှာ Font Awesome ပေါ်က icon တွေကိုငါဘယ်လိုရှာရလဲဆိုတဲ့အမြန်ဗီဒီယိုကိုဒီမှာပြပြီးငါ့ Illustrator ဖိုင်တွေထဲမှာအဲဒါတွေကိုသုံးပါ။
Photoshop, Illustrator နှင့်အခြား Desktop Platforms များဖြင့် Font Awesome ကိုအသုံးပြုနည်း။
ဤတွင် Font Awesome ကို Illustrator (သို့မဟုတ်အခြား desktop platforms) များမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည်။
သင်၏ Fontawesome Font အတွက်အောက်လိုင်းများကိုဖန်တီးပါ
စိတ်ထဲထားရမည့်အရာတစ်ခုမှာ၎င်းကိုဖောင့်ကို embed မလုပ်ဘဲ system ပေါ်တွင် install လုပ်ရန်မလိုအပ်သည့် platform တစ်ခုတွင်အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းကို Word တွင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏စာဖတ်သူအား၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်သူတို့၏ system ပေါ်တွင်ဖောင့်ထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ Illustrator သို့မဟုတ် Photoshop တွင်စာလုံးကို vector image အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် Create Outlines ကိုသုံးနိုင်သည်။
In Illustrator, သင်သည်စာလုံးကို vector image သို့ပြောင်းလဲရန် Create Outlines ကိုသုံးနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် Selection tool ကို အသုံးပြု၍ Type> ကိုရွေးပါ အောက်လိုင်းများဖန်တီးပါ။ Keyboard command Ctrl + Shift + O (Windows) သို့မဟုတ် Command + Shift + O (Mac) ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
In photoshop ကို, စာသားအလွှာပေါ်တွင် right-click လုပ်ပါ။ မောက်စ်ကိုစာသားအလွှာ ([T] သင်္ကေတမဟုတ်) ပေါ်တွင်နေရာချကာညာခလုပ်နှိပ်ပါ။ ဆက်စပ်မီနူးမှရွေးချယ်ပါ Shape သို့ပြောင်းပါ.
Font Awesome ကို Download လုပ်ပါ
ထုတ်ဖော် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကဒ်ပြားများကိုမှာယူခဲ့သည် မူး နှင့်အထက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Affiliate link ကိုရှိသည်။
Tags: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်အလုပ်လိပ်စာကဒ်ဖောင့်ဖောင့်ကိုအကြမ်းဖျင်းပြောင်းပါဖောင့်ပုံသဏ္toာန်ပြောင်းလဲဖောင့်အကြမ်းဖျင်းဖန်တီးပါအကြမ်းဖျင်းဖန်တီးပါdjဖောင့်ကို download လုပ်ပါdownload, ကြောက်မက်ဘွယ် font ကိုဖောင့်ဘယ္လိုလူမှုရေးသင်္ကေတများပြုလုပ်နည်းအိုင်ကွန်သရုပ်ဖော်မင်္ဂလာပါMoomoo ကတ်များphotoshopထုတ်လုပ်သူဆိုရှယ်မီဒီယာ icon များမြဝတီအားနည်းချက်ကို